အပေါ် Posted 08 / 29 / 2018 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် လိင်မူးယစ်ဆေး Powder. ဒါဟာရှိပါတယ် 59 မှတ်ချက်.
Sildenafil citrate 171599-83-0 erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အဆုတ်သွေးလွှတ်ကြောသွေးတိုးရောဂါ (PPH) ဆက်ဆံဖို့အသုံးပြုတဲ့မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ Sildenafil ရွေးချယ်လူသားတွေအတွက် PDE5 လှုပ်ရှားမှုတားစီးနိုင်ပါတယ်။ PDE5 မြင့်မားသည်အခြားတစ်ရှူးများနှင့်အင်္ဂါများတွင်လိင်တံရေမြှုပ်နှင့်အနိမ့်အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ sildenafil ယူပြီးပြီးနောက် Corpus cavernosum vasomotor ကြွက်သားမူးယစ်ဆေးဝါး၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအောက်တွင်ပြေစေပြီး၎င်းသွေးစီးဆင်းမှုတိုးပွါး, ထိုလိုဏ်ဂူခန္ဓာကိုယ် congested သည်နှင့်လိင်တံအားဖြင့် penile erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ်တစ်ဦးကုထုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်စိုက်ထူထားသည်။
သို့သော်ထိရောက်မှု - Flibanserin 147359-76-0 မူလကစိတ်ကျရောဂါ၏ကုသမှုများအတွက်တီထွင်မူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ဤဧရိယာ၌ထိရောက်မှုဖြစ်ဖို့ကိုတွေ့ခဲ့ပြီးယခုအခါအမျိုးသမီး hypoactive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု (HSDD) ၏ကုသမှုများအတွက် re-အတည်ပြုထားပြီး flibanserin ၏ခေါင်းစဉ်န်းကျင်အများအပြားအငြင်းပွားစရာများ (Addyi) နှင့်၎င်း၏စွပ်စွဲချက်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်ဤနေရာတွင်အတည်ပြုခဲ့သည်မပေးပါ။
သငျသညျတခုစိုက်ထူပြဿနာရင်ဆိုင်ရလျှင်, လိင်မူးယစ်ဆေးသင်ကစစ်တိုက်ခြင်းကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဒီရောဂါဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေအပြင်, သငျသညျလညျးပြည့်စုံလိင်ကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်သင်လုပ်ရပ်စဉ်အတွင်းa"ကိုပျက်ပြား" ၏ကြောက်လန့်ဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲသင်၏အိမ်ထောင်ဖက်ကျေနပ်နိုင်ပါတယ်; အချိန်မှာစိတ်ရှုပ်စရာနဲ့ရှက်စရာခံစားမှု။
ယောက်ျားမိန်းမမရှိတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူလိင်ရှိသည်ဖို့ဆန္ဒရှိသော်လည်းသည့်အခါဘဝစဉ်အတွင်းကြိမ်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဤပြဿနာကိုအများအားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောအချက်များဖြစ်နိုင်သည်ပင်ပန်း, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြဿနာများ, စိတ်ဖိစီးမှု ... အဲဒီလိင်စိတ်နှင့်အပျော်အပါးအတွက်တစ်စက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
6955 Views စာ
admin ရဲ့, admin ရဲ့09 မှာ 29 / 2018 / 6: 06 နံနက်
PDE5 inhibitor အနေဖြင့်၊ သွေးလည်ပတ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်းသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်
admin ရဲ့, admin ရဲ့09 မှာ 29 / 2018 / 5: 17 နံနက်
ကြွင်းသောအရာဆောင်းပါးမှာတော့တိုင်းလိင်မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှု၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဝေမျှပါလိမ့်မယ်။ စသည်တို့ကို tadalafil မူးယစ်ဆေးအပြန်အလှန်, flibanserin မူးယစ်ဆေးအပြန်အလှန် ... ပါဝင်သည်။
admin ရဲ့, admin ရဲ့09 မှာ 29 / 2018 / 5: 09 နံနက်
ကြွင်းသောအရာဆောင်းပါးမှာတော့တိုင်းလိင်မူးယစ်ဆေးပိုမိုအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များဝေမျှပါလိမ့်မယ်။ သောက်သုံးသော, ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး, အသုံးပြုမှု ... စသည်တို့ပါဝင်သည်။
admin ရဲ့, admin ရဲ့09 မှာ 29 / 2018 / 4: 40 နံနက်
မျှဝေလိင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ကျန်များတွင်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအရပါလိမ့်မယ်။ tadalafil ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသို့မဟုတ် Flibanserin ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို၎င်း, သောက်သုံးသောသတင်းအချက်အလက် ... စသည်တို့သာ။
admin ရဲ့, admin ရဲ့09 မှာ 29 / 2018 / 4: 29 နံနက်
အမှုန့်ပုံစံအတွက် Viagra မဆိုလို, Viagra ၏တက်ကြွသောပစ္စည်းဥစ္စာ sildenafil citrate အမှုန့်ဖြစ်ပါသည်
ခကျြ Summers09 မှာ 25 / 2018 / 9: 24 နံနက်
ကျွန်တော်တစ်ဦးအနေဖြင့်တစ်ကြိမ်, ဤလိင်မူးယစ်ဆေးဝါးများကွိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်မခင်ပွန်းကိုမေးမြန်းပါတယ်။ တဦးတည်းမှာကိုယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ခြားနားချက်ကျနော်တို့ကိုအသုံးပြုကြောင်းကိုအချိန်ကာလအတွင်းအမှန်ပင်ရှိကွောငျးကိုသတိပြုမိပါတယ်။ ရလဒ်များအရအိပ်ယာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး, သို့မဟုတ်ပါကပဲတကယ်တစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှု။ သို့သော်နေဆဲတစ်ခုကိုနေ့စဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဟာမတူညီတဲ့အရာတစ်ခုခုချင်ရုံအခါ။
ရိုင်ယန်ကိုဒံယလေ09 မှာ 25 / 2018 / 9: 21 နံနက်
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ, ငါသည်မရှိသေးပါလိင်မူးယစ်ဆေးကြိုးစားခဲ့ကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်ငါအနာဂတ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဤဆောင်းပါးကိုကိုစောင့်ရှောက်တယ်။ ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအား သာ. ကြီးမြတ်ပါစေနိုင်လျှင်, ကိုယ့်ကြောင့်မသုံးမဆိုအကြောင်းရင်းမမြင်မိပါဘူး။ သို့သော်ကိုယ်ကအပေါ်မှီခိုရရမဟုတ်သကဲ့သို့, ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုဖြည့်ညှင်းများတွင်အသုံးပြုသင့်ကြောင်းစဉ်းစားပါ။
Albeneth09 မှာ 23 / 2018 / 10: 49 ညနေ
ဤအလိင်မူးယစ်ဆေးဝါးများအန္တရာယ်ကင်းပါသလား? ငါသူတို့မှီခိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ဘူးမျှော်လင့်ပါတယ်။ အားလုံးအထက်တစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆရာဝန်တိုင်ပင်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Doug Brian09 မှာ 23 / 2018 / 5: 33 ညနေ
ဒါဟာဒီဆေးတွေယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့ရရှိနိုင်ပါသည်ကောင်းပါတယ်။ သူတို့ကဆရာဝန်တွေအဘို့သတ်မှတ်နှင့် မှနေ. ၎င်းတို့ကိုထောက်ခံပေးရမည်နိုင်သည်ကိုကျန်းမာဖြည့်စွက်ကဲ့သို့မြည်။
Hanks Nolan09 မှာ 23 / 2018 / 5: 31 ညနေ
Lionel09 မှာ 23 / 2018 / 1: 47 ညနေ
အမ်မာ09 မှာ 23 / 2018 / 1: 42 ညနေ
utibe09 မှာ 23 / 2018 / 12: 32 နံနက်
ဒီအသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်လိင်အဘို့ကောင်းသောမူးယစ်ဆေးဝါးအမှုန့်များမှာသိကြပေမယ့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများအတွက်လည်းစာဖတ်သူများအချို့ Viagra ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုပြောပြရန်လည်းကောင်းသောပါပြီလိမ့်မယ်။
ဒိုင်ယာနာ09 မှာ 23 / 2018 / 12: 24 နံနက်
ယောက်ျားသုက်ပိုးနှင့်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ရေလောင်းရှိခြင်းကနေအိမ်ထောင်ရေးပြဿနာကို stem ၏တစ်ဦးကအများကြီး။ ဒါဟာကောင်းသောကျွန်တော်လိင်ဤပြဿနာကိုကိုင်တွယ်ရန်ဤကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးများတိုးမြှင့်ပြီ။
Pietro Tee09 မှာ 22 / 2018 / 9: 23 ညနေ
ဒါကြောင့်သင်ကလိင်မူးယစ်ဆေး, Viagra တိုးမြှင့်ကြောင်းပြောနေကြပါသည်, အမှုန့်ပုံစံကိုအခုဖြစ်သနည်း ဝမ်းမြောက်သောစိတ်! သငျသညျယခုသင့်လက်ဖက်ရည်အဘို့အ Viagra ရ။ ဒါပေမယ့်ဖမ်းကြောင့်သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်မည်မဟုတ်, ဖြစ်ပါတယ်, ကိုယ့်ပျော့ hahahahaha မယ်မှသင်၏ဘီစကစ်မုန့်ရပ်လိုက်နိုင်သည်။
sexy Mack09 မှာ 22 / 2018 / 9: 19 ညနေ
ဤစကားမှန်ပါသလော ဒါကြောင့်ဒီအကြှနျုပျကိုလိင်၏ 15 ကျည် get ကြမည်နည်း ဒါကအများကြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ drugs.hahahah ကမီးလောင်ရာခံရဖို့လိုအပ်
Rhona Burchill09 မှာ 22 / 2018 / 9: 05 ညနေ
ငါဘာကြောင့်ဒီမှာနေရတာလဲဆိုတာတော့သေချာမသိဘူး၊ ငါလက်ထပ်ပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာပြီးနောက်ကျွန်မခင်ပွန်းကသူ့မောင်းနှင်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဖြည့်စွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍သာ ဤသည်နေ့ရက်ကာလသာဖြစ်ခဲ့လျှင်သူသည်တွန့်ဆုတ်နေလိမ့်မည်၊ သို့သော်ယခုသူသည်အေးဆေးစွာနေခဲ့သည်။
ဗစ်တာ09 မှာ 22 / 2018 / 8: 32 ညနေ
က meds မှကြွလာသောအခါငါသည်အနည်းဆုံးလိင်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ပွင့်လင်းမရဖြစ်၏။ ဂျင်ဆင်းနှင့်တူသဘာဝပစ္စည်းပစ္စယပုလှည့်ကွက်မ !!! ကျွန်မအသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျွန်မဒီကိုအသုံးပြုဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မတကယ်ကဒီစဉ်းစားနေပါတယ်။
Malik Vennity09 မှာ 22 / 2018 / 7: 53 ညနေ
အမြိုးသမီးမြားထံမှ Tadalafil နှင့်ပျြောမှေ့စအတွေ့အကြုံများကို၏ PDE5 သက်ရောက်မှု Viagra Flibanserin နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးအသုံးဝင်သောဖြည့်စွက်ထွက်ရှာကျားမဖြစ်စေဘို့အတွက်လုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ကြသည်။ ငါပြည်ပမှာအမေရိကန်နှင့်များတွင်ဖော်ပြထားသောဆေးဝါးမဆိုဘို့အများအပြားစိတ်ဝင်စားပါတီများရှိလိမ့်မည်သေချာပါတယ်။
Howy Ridell09 မှာ 22 / 2018 / 7: 48 ညနေ
Shanna Beltram09 မှာ 22 / 2018 / 1: 03 ညနေ
ဒါဟာသင်တစ်ခုခုနှင့်ပြည့်ဝ၏တစ်အိတ်နှင့်တူသောနှင့်အတူအိတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ရေချိုးခန်းတင်းကုပ်သို့ခုန်မတိုင်မီသင်သို့ရတဲ့အနေအရာပေါ်သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုရှိသည်အရေးကြီးပါတယ်။ သငျသညျအထဲကကူညီပေးဖို့ကျနော်တို့မူးယစ်ဆေးဝါးဝါသနာအိုးဖိုရမ်များမှတဆင့်လှန်လှောန့်အသတ်လေ့လာမှုများတည်ရှိသောအရာကိုကျော် combed နှင့်အတူတကွ၏ဤ rundown ထားရန်အပျော်တမ်းနိူးထံမှဆရာဝန်များနှင့်စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်-အဖြစ်ကျနော်တို့တတျနိုငျသရန်, psychonauts အဖြစ်များစွာသောလူ-ကနေပေါ့ပေါ့ tokers တိုင်ပင်ပါတယ် ထွက်ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်မြင့်မားသော humping အကြောင်းကိုဖွင့်သမျှသောအချက်အလက်။
Janine မာရီအလက်ဇန္ Bocateja09 မှာ 22 / 2018 / 1: 00 ညနေ
တချို့ကလိင်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအခြားသူများပြည့်စုံလားလူသတ်သမားများနေစဉ်, ecstasy ဖြည့်စွက်ရန်သင့်အားဖွင့်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ သင်ကမူးယစ်ဆေးဝါးအမည်နှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကသူတို့ကအပေါ်လိင်ဆက်ဆံကိုချစ်လို့ပြောပါတယ်။
nolly09 မှာ 22 / 2018 / 5: 45 နံနက်
ဒါဟာမူးယစ်ဆေးတိုးမြှင့်လိင်နှစ်မျိုးစလုံးကိုအထီးသို့မဟုတ် female.this အဘို့အကြောင်းကောင်းလှ၏အနားမဆို incase နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းကြောင့်ဒီဆေးတွေမဆိုအတူ revolved ပါလိမ့်မည်ဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှိကူညီပေးပါမည်
Danny09 မှာ 22 / 2018 / 5: 19 နံနက်
ဒါဟာသေချာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၏ broen ပါပြီရမယ်အချို့ကြားဆက်ဆံရေးပြန်လည်ရှင်သန်ရန်ကူညီပေးပါမည်။ ချစ်သူများတစ်ဦးပြန်လည်ရှင်သန်မှုအတွက်ဒီအပေါ် leaverage သငျ့သညျ။
Vikram Parmar09 မှာ 21 / 2018 / 10: 20 ညနေ
Mog Arten09 မှာ 21 / 2018 / 7: 03 ညနေ
မိုင် Dubager09 မှာ 21 / 2018 / 4: 41 ညနေ
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တွေ့ရှိချက်။ သတ်မှတ်ထားသောထက် Tadalafil သို့မဟုတ် Flibanserin ပိုယူပြီးထံမှမဆိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိပါတယ်လျှင်ငါစပ်စုဖြစ်ချင်ပါတယ်။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Lisa ကို Nataliany09 မှာ 21 / 2018 / 9: 28 နံနက်
ငါသည်ဤဆောင်းပါးကိုရှာဖွေနိုင်အောင်ဝမ်းသာပါတယ်နှင့်လည်းဒီဖတ်ရှုဖို့ကျွန်မခင်ပွန်းကိုမေးပါလိမ့်မယ်။ လူတိုင်းကဒီ၏ရှက်ကြောက်ခြင်းခံစားရရန်မလိုအပ်လိင်လိုအပ်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်အတွက်လိင်မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုန့်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ဝေမျှခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကြောင့်အလွန်အသုံးဝင်ပါ!
ရစ်ချတ် Hanks09 မှာ 21 / 2018 / 7: 59 နံနက်
ငါနှင့်ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ဘဝကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်နည်းလမ်းများရှာဖွေနေပါသည်။ သူတို့ကြိုးစားနေရကျိုးနပ်ပါတယ်နဲ့တူဒီဆေးတွေအသံ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ဗင်းဆင့် Matthews က09 မှာ 21 / 2018 / 7: 56 နံနက်
ယခုငါရင်းနှီးအချိန်လေးအတွင်းမှာတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်သုံးစွဲဖို့အဘယျသို့မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသိ! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, သင့်ဆောင်းပါးတွေကိုချစ်။
တွမ် Esthber09 မှာ 21 / 2018 / 6: 39 နံနက်
ကျွန်တော့်ကိုမကြာခဏဆိုသလိုချိုချိုသာအောင်လုပ်ပေးတာကလွဲရင်ကျမရဲ့နှိုးဆွမှုမှာပြwithနာမရှိခဲ့ပါဘူး။ ငါ haha ​​သော်လည်း, နှစ်စုံတွဲတစ်တွဲအတွက်ဒီ PDE5 ဖြည့်စွက်လိုအပ်နိုင်ပါသည်ထင်ပါတယ်။
benedicta09 မှာ 21 / 2018 / 1: 32 နံနက်
ငါကလူကိုအသုံးပြုကြသည်ရုံ Viagra လိုကတည်းက Udenafil အကြံပြုပါလိမ့်မယ် to.The ဒီတစ်ခုအကြောင်းကိုကောင်းသောအရာကန့်သတ်အခြမ်းကအလွန်အမင်းလိင်အသုံးပြုရန်အကြံပြု effects.So ဖြစ်ပါတယ်
ကလေး09 မှာ 21 / 2018 / 1: 26 နံနက်
လိင်ကာလအတွင်းအပျော်အပါးမိတ်ဖက်များအတွက်အလွန်အရေးပါသည်နှင့်၎င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ life.I သူတွေကိုဒီအပျြောအပါးသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကောင်းသောအဘို့ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသုံးနိုင်သည်ရှိခြင်းမဟုတ်မျှော်လင့်ပါတယ်လုပ်သို့မဟုတ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။
အမှတ်09 မှာ 20 / 2018 / 11: 34 ညနေ
သငျသညျလိင်ပြဿနာကဒီလိင်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူဖြေရှင်းမပါလျှင်, ဆရာဝန်တစ်ဦးကြောင်းကိုအခြေအနေမျိုးကိုပြုကြဖို့အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်လိမ့်မည်ထင် consulted.I ဖြစ်သင့်ကြောင်းညွှန်ပြဘယ်မှာငါကြိုက်တယ်။
Nunu09 မှာ 20 / 2018 / 11: 27 ညနေ
ထိုကဲ့သို့သောကြောင့်အချိန်ကနေ time.it မှတိုးမြှင့်ရမည်ဖြစ်သည်အဖြစ်မည်သည့်စုံတွဲ၏လိင်ဘဝကိုမဆိုဆက်ဆံရေးတိုက်ရိုက်ဝါယာကြိုးနှင့်တူ၏ကောင်းသောဆက်ဆံရေး၏ကောငျးကြိုးအတှကျထိုအ enhancers မဆိုသုံးစွဲဖို့ပါလိမ့်မယ်။
Fredrick Isinguard09 မှာ 20 / 2018 / 11: 21 ညနေ
ယနေ့ခေတ်သည်ဤလိင်မူးယစ်ဆေးဝါးများအမှန်တကယ်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည့်ကျန်းမာလူငယ်များနေဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော်သူတို့ကသူတို့ဘဝတွေရဲ့တန်ဖိုးရှိသောအသှငျအပွငျပြန်လည်ဟောင်းများကိုလူများနှင့် ED ခံစားနေရသူ enabled ပါပြီ။
ဗိုလ်ကြီးတဦး09 မှာ 20 / 2018 / 10: 44 ညနေ
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကယခုပွင့်လင်း, လိင်မူးယစ်ဆေးဝါး, လိင်စွမ်းဆောင်ရည်တွင်ဤအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. ထုတ်ပြောဆိုရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ငါလိင်ကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်သလောက်အရေးကွီး၏ဆိုလို။ သူကပြောပါတယ်နှင့်အတူ, ဒီဆောင်းပါးတွေတည်ရှိကြောင်းဝမ်းသာတယ်။ အနည်းဆုံးလူပေါင်းဖြည်းဖြည်းချင်းဒီလက်ခံနေကြတယ်။
Mach09 မှာ 20 / 2018 / 9: 46 ညနေ
သော်လည်းအနက်ကျန်တာတွေအတွက်အဘယ်မှာရှိကြသနည်း ငါအလေးအနက်ထားဆိုလိုပါသလော အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယအဘယ်မှာရှိကြသနည်း ငါရေတွက်လာအဘယ်အရာကိုသိမှတ်ကြလော့, သငျသညျသုံးစွဲကြောင်းတစ်ခုခုဆိုလို။
Bradley လာဗင်ဒါ09 မှာ 20 / 2018 / 4: 17 ညနေ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုများအတွက်ကောင်းစွာစမ်းသပ်ပြီးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမူးယစ်ဆေးများကဲ့သို့အသံ။ ငါ Tadalafil သို့မဟုတ် Flibanserin သုံးနေစဉ်ယူဖို့မထားတဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးများသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်အကြောင်းကိုစပ်စုဖြစ်ချင်ပါတယ်။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Curt Rancher09 မှာ 20 / 2018 / 4: 14 ညနေ
အဆင့်မြင့်လိင်စိတ်များအတွက် Horray! Dyclonin နှင့်တစ်ဦးပိုမိုကောင်းမွန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်အစွမ်းထက်ပါဝင်ပစ္စည်းများတူသော flibanserin အသံသည်။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
AJ09 မှာ 20 / 2018 / 1: 21 ညနေ
အသိပညာကယူစခွေငျးငှါသမျှပုံစံ, တန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။ အနည်းဆုံးငါလိင်အတွေ့အကြုံကိုပိုပြီးပျော်စရာစေရန်လှုံ့ဆော်မဆိုကြင်နာလိုအပ်သင့်ပါတယ်, အခုယူအဘယ်သို့ငါသိ၏။
ဒါဝိဒ်သည် Tjoe09 မှာ 20 / 2018 / 9: 17 နံနက်
ဤသည်ကိုဖတ်ရှုဖို့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ် ... :) ။ ပဲသိချင်စိတ်ထဲက - ငါတစ်ချိန်ကဒီသုံးစွဲဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ထိုအပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, ငါတကယ်ကခံစားဘူး ... ငါငါ့နှလုံးပိုမြန် pounding နှင့်ငါ၏ဦးခေါင်း၌မသက်မသာခံစားခံစားရသည်။
Harold အဒမ်09 မှာ 20 / 2018 / 5: 40 နံနက်
Avanafil တကယ်ပဲငါ့ကိုမထုတ်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာနီးပါးစိတ်ဓာတ်ကျတယ်, နှင့်ကျေးဇူးတင်စရာငါ avanafil သတ်မှတ်ထားသောခဲ့သည်။
ယောလဖြစ်တဲ့ Warner09 မှာ 20 / 2018 / 5: 38 နံနက်
ငါပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်သောအခါငါ sildenafil citrate ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာတချို့အချိန် ယူ. , ဒါပေမဲ့တကယ့်ထိရောက်သောဖြစ်ခဲ့သည်။
admin ရဲ့, admin ရဲ့09 မှာ 20 / 2018 / 4: 17 နံနက်
မိတျဆှေမင်္ဂလာပါ Viagra ၏အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းသင် tadalafil CAS 171599-83-0 အောက်ကအသေးစိတျကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည် Sildenafil citrate, CAS 171596-29-5 ဖြစ်ပါသည်။
Mozd09 မှာ 20 / 2018 / 4: 08 နံနက်
ငါအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်အတူယောက်ျားအလွယ်တကူ penile erectile ချွတ်ယွင်းမြှင့်တင်ရန်နှင့်လိင်၏အရည်အသွေးနှင့်ကြာချိန်ကိုကူညီနိုင်မယ့်မူးယစ်ဆေးအဖြစ် Vardenafil ထွက်ကြိုးစားရန်စိတ်မဟုတ်ဘူးသေချာပါတယ်။
Bolly09 မှာ 20 / 2018 / 4: 01 နံနက်
ငါ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူအထီးသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့စိုက်ထူပြန်ရရှိရန်ကူညီပေးဖို့ဝယ်ဖို့ Sildenafil citrate ကိုဖတ်ရမှမျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါဟာကောင်းသောလိင်ဘဝအဘို့အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ဂျို09 မှာ 19 / 2018 / 10: 09 ညနေ
ဘာလို့ဒီစာအုပ်ကိုငါဖတ်နေတာလဲမသိဘူး ဟားဟား။ သို့သော်ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်။ ကြီးမြတ်သတင်းအချက်အလက်။ မည်သည့်လိင်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမသောက်မှီကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ကိုမေးမြန်းပါ။
Kurt09 မှာ 19 / 2018 / 9: 14 ညနေ
ဒီလိင်ဆေး၏တဦးတည်းယူမီပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ဆရာဝန်တိုင်ပင်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ငါများသောအားဖြင့်တစ်စုံတစ်ဦးကဒီအမှုကြောင့်ကွယ်လွန်ဘယ်မှာဖြစ်ပွားမှုကိုဖတ်ရှုဆိုလို။ စာသားတစ်ပေါက်ကွဲသံကြီးနှင့်အတူအထဲက Going ။
Jiffy Rando09 မှာ 19 / 2018 / 8: 59 ညနေ
ကံကောင်းထောက်မစွာငါအိုင်တီလိုကြပါဘူး။ သေးခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ကြလိမ့်မည်ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ Viagra ဤအရပ်၌မရှိအံ့အားသင့်မိပါတယ်။
သူငယ်09 မှာ 19 / 2018 / 7: 05 ညနေ
8 သြဇာလိင်မူးယစ်ဆေးအမှုန့်, ဒီတစျရှေးခယျြမှု၏အဓိပ္ပာယ်ပေးသည်နှင့်အလွန်အရေးကြီးပါသည်နှင့်ဤအမှုန့်ကျိန်းသေထွက်ကူညီပေးပါမည်ပြန် choice.Getting တဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစာစားချင်စိတ်နှင့်အတူတင်းကြပ်စွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။
Teddy09 မှာ 19 / 2018 / 6: 57 ညနေ
ဒါကတကယ်ကိုပူပြင်းတဲ့ post ကို, စုံတွဲများပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဤအချက်အလက်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်ငါ့ system အတွက်ကောင်းသောဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမည်သူမဆိုသုံးပြီးကြည့်ရှုသူတို့ရဲ့လိင် life.I မြှင့်တင်ရန်ဒီ post အံ့သြဖွယ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဤအချက်အလက်အချိန်မီဖြစ်ပါသည်, ဆေးညွှန်းမပါဘဲ cialis ကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။
Landen Burrow09 မှာ 19 / 2018 / 5: 10 ညနေ
Moz Chesk09 မှာ 19 / 2018 / 4: 25 ညနေ
ဤရွေ့ကား, သင်၏လိင်ဘဝကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်အသုံးဝင်ကုစားနဲ့တူပုံရသည်, နှင့်သင်ဖို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုငါသိ၏။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Moch Sugih09 မှာ 19 / 2018 / 12: 35 ညနေ
ကျွန်မဤကဲ့သို့သောလိင်မူးယစ်ဆေးဝါးများမှီခိုဖြစ်စေ, ကြှနျုပျတို့နည်းကပိုဖြစ်တယ်, သင်မကြာခဏဒီကိုမသုံးကြပါလျှင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကကောင်းတဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ် them.But အသုံးမပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်မှုနည်းခံစားရစေနိုင်သည်ထင်ပါတယ်။
Leonard ယ်စလီ09 မှာ 19 / 2018 / 7: 25 နံနက်
ငါတကယ်မူးယစ်ဆေးပိုမိုဒါလိင်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်စိတ်ကူးမရှိကြပါဘူး။ ထိုသူတို့ကယ့်ကိုလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အတူကူညီ ??
အယ်လ်ဖွန်ဆို Franklin09 မှာ 19 / 2018 / 7: 21 နံနက်
wow ငါရောနှောယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းဘို့ကွဲပြားခြားနားသောလိင်မူးယစ်ဆေးဝါးများရှိပါတယ်မသိခဲ့ပါ။ အဘယ်အရာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖတ်!
ဆွစ်09 မှာ 19 / 2018 / 2: 35 နံနက်
ငါတကယ်ဤအချက်အလက်သည်ဤ article.I ကိုဖတ်ရနျလိုအပျသောသူတို့ကိုအကစုံတွဲများအကြားဆက်ဆံရေးကောင်းအားပေးမည်ဟုကူညီပေးပါမည်ကြောင့်ဤလိင်စိတ်ကြွဆေးအလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မည်ထင်မျှော်လင့်ပါတယ်။
Feddy09 မှာ 19 / 2018 / 2: 27 နံနက်
ဤသည်အလွန်တန်ဖိုးရှိသော post.Sex ပြဿနာများကိုအမှန်တကယ်ဆိတ်ကွယ်ရာအချို့မိသားစုများကိုဆုတ်ခဲ့ကြပြီးကဤကဲ့သို့သောအချို့သောအကောင်းလိင်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ကိုးကွယ်ရာအဘို့ခွဲထားခဲ့သည်နဲ့ယူသင့်ကြောင်း pertinent ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးတွေလိင်စိတ်မြှင့်တင်ရန်လိုကူညီပေးနိုငျသောအလွန်ကောင်းမွန်သော။
MAGL inhibitor နှင့် FAAH တား: JW-642 & ol-135 & PF-7507၏စျေးကွက်အတွက် 2018 အကောင်းဆုံး Nootropics (စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး)